အဝတ်လျှော်နိုင်သောကြွေ Percolator Mini Faucet Tap Water Filter - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်း ၀ ယ်ပါ WoopShop®
အဝတ်လျှော်နိုင်သောကြွေ Percolator Mini Faucet Tap Water Filter
$45.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $75.99
မှစ. သင်္ဘောများ စပိန် ရုရှားပြည်ထောင်စု တရုတ်နိုင်ငံ ပိုလန် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘယ်လ်ဂျီယမ် ပြင်သစ်
စပိန် / အဖြူ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း တရုတ် / အဖြူရောင် ပိုလန် / အဖြူ ယူနိုက်တက်စတိတ် / အဖြူရောင် ဘယ်လ်ဂျီယံ / အဖြူရောင် ပြင်သစ် / အဖြူ
ဆေးကြောနိုင်သောကြွေ Percolator Mini Faucet Tap Water Filter - စပိန် / အဖြူရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အသုံးပြုမှု - Faucet-Mounted
အမျိုးအစား: ကြွေ filter ကို Element ကို
5 အဆင့် Filtration: ဟုတ်ကဲ့
တပ်ဆင်ခြင်း - ရေအေးပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း
ရေထွက်နှုန်း (လီတာ / မိနစ်) - ၂.၀
သန့်စင်ရာဌာန: Terminal ကိုသန့်စင်
ရေအရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များ - စည်ပင်သာယာရေ / ရေတွင်းရေ
ပစ္စည်း: ကြွေ Filter ကို Element ကို
filter ကိုအဆင့်:9ဇာတ်စင် filtration
ကိုးအဆင့်ဒဏ်ငွေ filtration, နက်ရှိုင်းသောသန့်စင်
မျိုးဆက်သစ်ပေါင်းစပ် filter များ၊ အသိဉာဏ်ရှိသောစစ်ထုတ်ခြင်း၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်
သေးငယ်သောပမာဏနှင့်ကြီးမားသောစီးဆင်းမှု၊ ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းသည် 2L / Min အထိရောက်ရှိနိုင်သည်
အဆိုပါ filter ကိုဆေးကြောပြီးလျှင်ဆေးကြောနိုင်ပါတယ်
အဆိုပါကြွေပေါင်းစပ် filter ကို
အစားထိုး filter ကိုဒြပ်စင်လေးခုတပ်ဆင်ထားသည်
1 * ရေစစ်စက်
4 * ကြွေထည်မြေထည်
1 * Universal Adapter ကို
3 * ပြည်တွင်း Thread Adapter က
3 * ပြင်ပချည် Adapter
အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်းနှင့်ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်။ လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ပိုပြီးတ ဦး တည်းအမိန့်ပေးခဲ့သည်
ကိုယ့်ကံကြမ္မာရဲ့ရေကိုသောက်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးလူစားသုံးမှုအတွက်လုံးဝသန့်ရှင်းအောင်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်အမှုန်ကြီးများကိုသာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရုံသာမကတစ်သန်းလျှင်ဘက်တီးရီးယားနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့် TDS သာမိုမီတာနဲ့တောင်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရေပိုက်ကနေတူညီတဲ့ PPMs နဲ့ filter ကနေပေါ့။ ဒါကြောင့်နေဆဲရေထဲမှာစိုင်အခဲတစည်းအရွက်။ အနည်းဆုံးတော့ငါ့နိုင်ငံမှာရေပိုက်ကနေကောင်းကောင်းသန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ဒီ filter ကငါ့အတွက်ဘာမှမတိုးတက်ဘူး။ ရေအရည်အသွေးဟာတော်တော်လေးဆိုးဝါးတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြယ် ၄ ပွင့်ကကောင်းကောင်းထုပ်ပိုးပြီးဖြန့်ဝေမှုမှကာကွယ်ထားသည်။
အလွန်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့။ ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယအမိန့်မှာအလွန်ကျေနပ်အားရဖွယ်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး
၂ ရက်အတွင်းပေးအပ်လိုက်သောအရာအားလုံးသည်ဖော်ပြချက်နှင့်တူညီသည်။ အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများ!
အလွန်လျှင်မြန်စွာပို့! အလွယ်တကူ install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေအရည်အသွေးကိုယခုအချိန်ထိမသိရှိရသေးသော်လည်း၎င်းသည်ကောင်းမွန်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ စတိုးအကြံပြုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!